बिहे पछि किन बढ्छ महिलाको हिप ? यस्तो छ कारण - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
बिहे पछि एउटा नयाँ जीवन सुरु हुन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जीवनमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन आउँछ । पुरै जिन्दगी बदलिन्छ र यो समायोजन गर्न अलि समय पनि लाग्छ । साथै उनीहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । आखिर बिहेपछी किन यस्तो हुन्छ त ? उनीहरुको नितम्ब किन फुल्छ ?